बालाजु बाइसधार मेला स्थगित, भक्तजनले उद्यान बाहिरैबाट गरे पूजाआजा (फोटो फिचर) Global TV Nepal
ग्लोवल टि.भी. मङ्लबार, बैशाख १४, २०७८ 0
हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन लाग्ने बालाजु बाइसधारा मेला कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएको कारण यस वर्ष पनि स्थगन गरिएको छ । मेलामा लाखौंको संख्यामा भक्तजन आउने र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएपछि मेला स्थगन गरिएको बालाजु बाइसधारा उद्यानले जनाएको छ ।
उद्यान कार्यालय प्रमुख दामोदर लामाले मेला लाग्दा भिडभाड हुने र संक्रमण बढ्ने जोखिम भएकाले मेला स्थगन गरिएको बताए ।
गत वर्ष पनि कोभिड संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण भन्दै गरिएको लकडाउनका कारण मेला लाग्न सकेको थिएन् । बाइसधारामा सर्वसाधारणलाई प्रवेश रोक लगाइएपछि दर्शनार्थीले उद्यान बाहिरैबाट पूजाआजा गरेका छन् ।
आजको दिन बाइसधारामा स्नान गरी दिवङ्गत आफन्तका नाममा बत्ती बाल्ने परम्परा रहेको छ । यसै दिन नुवाकोटको कडल्चोक भगवतीलाई पनि बालाजुमा ल्याएर त्यहाँ रहेको सेतो पाटीमा राखी हवन तथा राँगाको बलि दिने प्रचलन पनि रहेको छ । यस्तै आज बिहानै नागर्जुन वनमा रहेको जामाचो डाँडामा पुगेर बालाजु फर्की बाइसधारमा स्नान गर्ने परम्परा पनि छ । यसरी बाइसधारामा नुहाइसकेपछि मनमैजु देवीको दर्शन गरेमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने धार्मिक जनविश्वास पनि रहेको छ ।
आज केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम विभाग आग्रह
कांग्रेसले भन्यो – महामारीमा नगर्ने भए उपचार, किन चाहियो सरकार ?
‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हेरफेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार’